बरब्याङ्कको अवस्थिति ४०°५९′१९″उ॰ ८१°५९′४०″प॰ ४०.९८८५१०, -८१.९९४३८३ रहेको छ ।
संयुक्त राज्य जनगणना विभाग अनुसार, यस गाउँको क्षेत्र फल ०. ३ वर्ग माइल ०.७८ किमि² रहेको छ।
1. जनसङ्ख्या तथ्याङ्क
जनगणनाको २०००, अनुसार त्यहाँ २७९ मानिसहरू रहेका छन्, १०३ गृहस्थहरू, र ७६ परिवारहरू यस गाउँमा रहेका छन् । जन घनत्व ८४२.३ प्रति वर्ग माइल ३२६.५/किमि² रहेको थियो। प्रति वर्ग माइल ३२३.०को औसत घनत्व १२५.२/वर्ग किमि र १०७ आवासीय इकाइहरू रहेका थियो । आनुवंशिक रूपमा ९८.९२% गोराहरू, ०.७२% एसियन, र ०.३६% बर्णशंकर । हिस्पानीक या ल्याटिनीको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको १.०८% रहेको थियो ।
त्यहाँ ३९९ गूहस्थहरू थिए जस मध्ये ३४.०% हरूको १८ वर्ष मूनिका सन्तान थिए जो तिनीहरूसँग बसिरहेका थिए, ५६.३% साथ वसिरहेकाबैबाहिक दाम्पतिहरू,१०.७% हरूमा श्रिमान बिनाको गृहस्थ महिला, र २६.२% परिवार रहित थिए । कुल मध्ये १७.५% गृहस्थ एकल हरूको थियो भने ७.८% मा ६५ वर्ष या माथिका एक्लै बसिरहेका बृद्धबृद्धा रहेका छन् । औसत गृहस्थ आकार २.७१ र औसत परिवार आकार २.९७ रहेको थियो ।
गाउँको जनसङ्ख्या २६.२% १८, वर्ष मुनिका १०.४% १८ देखि २४ सम्मका, ३१.९% २५ देखि ४४, २१.१% ४५ देखि ६४, र १०.४% ६५ वर्ष माथिका रहेका थिए । औसत उमेर ३४ साल थियो । हर १०० महिलाहरूको लागि १११.४ पुरुषहरू थिए । हर १८ वर्ष माथिका १०० महिलाहरूको लागि ११०.२ पुरुषहरू थिए ।
गाउँमा एक घरको लागि औसत आय ३९,३७५ डलर थि यो,र एक परिवारको लागि औसत आय ३९,३७५डलर थियो । पुरुषहरूको औसत आम्दानी $३०,३१३ र महिलाहरूको $२३,३९३ रहेको थियो । गाउँको प्रतिव्यक्ति आय $१७,५५७ थियो । करिब ६.८% परिवार ७.२% जनसङ्ख्या गरीबीको रेखा मुनि रहेका थिए, ५.२% १८ वर्ष मुनिका र १२.५% ६५ वर्ष र माथिका ।